अमेरिकामा पहिलोपटक घर किन्नुपूर्व जान्नै पर्ने कुराहरु
यी सबै कुरा थेग्न र धान्न र टार्न र मनग्गे कमाइ भ​ए मात्र घर किन्नु नत्र ब्यबसाय गरि कमाउन थालेपछि मात्रै घर किन्दा हुन्छ​। आफ्नो लहडमा अरुले उचालेको भरमा, अरुले घर किन्यो म पनि किन्छु भन्ने लहड र इमोसनमा आफ्नो कमाइको औकात नहेरि घाटि नहेरि हाड ननिल्नु। घरले जिवनभर आर्थिक दास बनाउछ भन्ने कुरा नभुल्नु।
तपाइँ अमेरिकामा आफ्नो ड्रिम होमको बारेमा ड्रिमिङ्ग गर्दै हुनुहोला। एपार्टमेन्टको बसाइ, भाडाको घरको बसाइ, भाइसाथि, अन्य परिवार वा रुममेटहरु सङ्ग बसाइ शेयरिङ्ग गर्दागर्दै आफ्नै सानो कुटि जोड्ने सपना बुन्दै हुनुहुन्छ, हार्ड वर्किङ्ग गर्दै आफ्नै घरको बसाइसङ्गै पिस खोज्दै हुनुहुन्छ ? एपार्टमेन्ट वा अन्य बाध्यताबसको बसाइबाट आत्तिएर​, सकस एबम पिडा भोग्दै हुनुहुन्छ ? अहिले बस्दै गरेको बसाइमा भोग्दै गरेका र सामाना गर्दै गरेका बिबिध शर्तनामा एबम खुम्चिएको मनस्थिति फुकाउदै आफ्नै कुटि, आफ्नै भबन​, आफ्नै बास र आफ्नै थलो बनाउने शुरमा हुनुहुन्छ भने तपाइहरुका लागि काम लाग्ने, तपाइहरुलाइ सुरक्षित एबम सजग र सचेत बनाउन र गलत घर​, गलत घर दलाल​, गलत लेन्डर​, गलत मोर्गेज​, गलत ब्याजदरमा फस्नु पुर्ब अर्थात ति सबै खतरा एबम हुनसक्ने आर्थिक एबम मानसिक क्षति नहोस भन्नाका खातिर अमेरिकामा पहिलोपटक अर्थात दोश्रो पटक घर किन्ने र घर रिफाइनान्स गर्ने सबै दाजुभाइ दिदिबहिनि एबम बा आमाहरुका लागि यो लेख लेखेको छु।
लेख लामो हुने डरका कारण लेखलाइ खुम्च्याउने, सानो बनाउने र लामा लामा शब्दहरुलाइ काँटछाट गरि, कम निपातहरु एबम बाक्य जोड्ने बिशेषणहरुलाइ कम प्रयोग गरि लेख सकेसम्म सरल​, सबैले बुझ्ने एबम सकेसम्म घर किन्नु पुर्ब ध्यान दिनु पर्ने कुराहरुलाइ समेट्ने प्रयास गरेको छु।
कति क्रेडीट हुनुपर्दछ घर किन्न अमेरिकामा ?
१) फिस्कोको स्कोरको रेन्ज ३०० देखि ८५० सम्म हुने गर्दछ​।
२) घर किन्न कम्तिमा ५८० निम्नतम देखि ६४० भन्दा माथि नै हुनुपर्दछ​।
३) सरदर सहज र सरल घर ऋण मोर्गेजका लागि ६८० नाघेको हुनुपर्दछ स्कोर​।
४) एफ एच ए९ फेडरल हाउजिङ्ग एडमिनिस्ट्रेसन​०को ऋणका लागि ५८० निम्नतम हुनुपर्दछ​।
तर​, राज्य अनुसार अमेरिकामा क्रेडीट स्कोरको लेभल तय गरेको छ घर किन्नका लागि। बिभिन्न राज्यमा रहेका लेन्ड्रर कम्पनिहरुले घर किन्ने ब्याक्ति एबम परिवारको क्रेडीट स्कोरको तह फरक फरक छन​। क्रेडीट कर्माका अनुसार जस्तै अलास्का राज्यमा मिनिमम क्रेडीट स्कोर ६८६ भ​एकोलाइ आधार मान्दछ​। त्यसैगरि अलाबामाका लागि ६६८ क्रेडीट स्कोर​, एरिजोना राज्यमा ६७१, क्यालिफोर्नियामा ७०१, कोलोराडो ६९४, कनेक्टिकट ६८९, वाशिङ्गटन डीसि ७३०, फ्लोरिडा ६७३, जर्जिया ६७१, हवाइ ७१५, आइवोवा ६८२, इलिनोइज ६८४, इन्डियाना ६७०, क्यानसस ६८४, पेन्सिलभेनिया ६८८, रोडआइल्यान्ड ६८३, साउथक्यारोलिना ६७१, केन्टकि ६६९, लुजियाना ६६७, म्याचाच्युसे ७०५, मेरिल्यान्ड ६८०, मेन ६८३, मिचिगन ६७९, मिनिस्टोटा ६९५, मिजौरि ६७६, नर्थक्यारोलिना ६८३, नेब्रास्का ६९०, न्युह्याम्सियर ६९६, न्युजर्सि ६९७, न्युमेक्सिको ६७३, नेभाडा ६८२, न्युयोर्क ७०३, ओहायो ६७८, ओक्लाहामा ६७२, ओरिगन ७००, टेनेसि ६७५, टेक्सास ६७१, युटाहा ६९०, भर्जिनिया ६८८, वाशिङ्गटन ६९८, विनकनसन ६८९, वेष्ट भर्जिनिया ६७२ क्रेडीट स्कोर हुनुपर्नेछ निम्नतम घर किन्नका लागि।
लो क्रेडीटका लागि खतरा ?
१) धेरै डाउन पेमेन्टमा पर्न सक्ने।
२) सेभिङ्ग खाता हुनुपर्ने र सेभिङ्ग रकम हेर्नेछ​।
३) आम्दानि धेरै हुनुपर्ने।
४) ब्याजदर बढि पर्नसक्ने।
५) लामो रोजगार हिष्ट्रि खोज्ने।
६) ठुला बैङ्क​, बित्तिय सस्थाहरुले इन्कार गर्नसक्ने।
७) अन्य ऋणहरु जस्तै गाडी, क्रेडीट कार्ड सबैको भुक्तानि गरेको देखाउनु पर्ने।
मोर्गेज लेन्डरले के खोज्दछ ?​
१) २-३ बर्ष सम्मको कर दाखिला ट्याक्स फाइलिङ्ग​। कुनै कुनैले ६ बर्षसम्मको माग्न सक्छ​।
२) ऋणहरु भ​ए नभ​एको हेर्छ​।
३) आर्थिक लेनदेन​, ब्यबहार एबम इमान्दारिता हेर्छ​।
४) आम्दानि हेर्छ​।
५) रोजगारि पेस्टब एबम पेरोल हेर्दछ​।
६) सम्पति जायजेथा हेर्छ​।
७) आर्थिक हिस्ट्रि हेर्दछ​।
८) फाइनान्सियल ब्याकराउन्ड हेर्दछ​।
के के कुरामा ध्यान दिने घर छान्नुपुर्ब​ ?
१) आपतकालिन फन्ड सिर्जना गर्ने।
२) ऋणहरु भ​ए घटाउने, कम गर्ने र तिर्ने।
३) कतिसम्मको घर लिने स्व निर्णय एबम घरायसि छलफल गर्ने।
४) आफ्नो औकात​, कमाइ र अबस्थालाइ अध्ययन गर्ने।
५) महङ्गो शहरमा, महङ्गो राज्यमा महङ्गो घर​, महङ्गो कर हुन्छ​।
६) डाउन पेमेन्ट र क्लोजिङ्ग कस्टको जोहो गर्नु।
७) बैङ्ग वा लेन्डरबाट प्रि एप्रुभल लिनु।
८) छिमेकि राम्रो, स्कुल राम्रो र लो क्राइमको स्थान छान्नु।
९) राम्रो लेन्डरको हन्टिङ्ग गर्नु।
१०) राम्रो ब्रोकर छान्नु।
११) घर छान्दा दिर्घकालिन निर्णय लिनु, दिर्घकालिन सोच बनाउनु।
१२) फजुल खर्चमा कमि ल्याउनु र मितब्ययि बन्नु।
१३) घर आबश्यक नभ​ए, टार्न सक्ने भ​ए नकिन्नु घर पहिले।
१४) घर भन्दा ब्यबसाय गर्नु पहिले।
घरको कुन कुन कुराहरु वाच गर्ने ?
१) रुफिङ्ग छानाको अबस्था।
२) प्लम्बिङ्ग​, पानि, इलेक्ट्रिकल र जमिन हेर्नु।
३) सेफ्टि ट्याङ्क​, ढल निकास​, फोहोरमैलाको ब्यबस्थापन हेर्नु।
४) घरको हिष्ट्रि, निर्माण र अबस्था एबम बनावट हेर्नु।
५) राम्रो गतिलो, ब्यबसायिक इन्स्पेक्सन गराउनु सबै कुरा।
६) घर काउन्टी, सिटीमा कता हो हेर्नु र कर मुल्य पत्ता लगाउनु।
७) बाढि पैर्हो, प्राकृतिक प्रकोपको अबस्थालाइ मध्यनजर राख्नु।
८) हावापानि, बाटो, अबस्था, स्कुल​, कलेज​, स्वास्थ्य अस्पताल एबम रोजगारि र अबसरको अबस्था हेर्नु।
९) घर बिक्रि लिस्टीङ्गमा उल्लेख गरेको कुराहरु म्याचिङ्ग गर्नु।
कस्तो ब्रोकर दलाल छान्ने ?
१) बिश्वनिय निकायबाट रिफरल गर्को ब्रोकर हेर्ने।
२) नेटवर्किङ्ग प्रयोग गर्ने।
३) लाइसेन्सवाला, अनुभवि एबम बिश्वसनिय खोज्नु।
४) रियल स्टेट कम्पनिसङ्ग सोधनि गर्नु।
५) लेन्डरसङ्ग नेटवर्किङ्ग भ​एको ब्रोकर हेर्नु।
६) फटाहा, बदमास​, छलछामकारि एबम चिप्ला दलालहरुबाट टाढै बस्नु।
७) वकिलसङ्ग समन्वय गर्नु कागजातमा हस्ताक्षर गर्नु पुर्ब​।
८) कुनै कागजात हेर्न​, पढ्न र साइन गर्नु पुर्ब सम्बन्धित वकिलको सहयोग लिनु।
९) टापटिपे, एकल​, बिना अनुभवि, बिचका दलाल ब्रोकरसङ्ग डिल नै नगर्नु।
१०) सकेसम्म गोरा ब्रोकरहरु हेर्नु। ठगिने सम्भावना कम हुन्छ​।
११) नेपालि भन्दैमा सिधै बिश्वास नगर्नु नेपालि दलाल ब्रोकरहरुसङ्ग​।
१२) ब्रोकरले के भन्छ​, कस्तो कुरा गर्छ ति सबै आफ्ना अनुभवि भरपर्दा भाइसाथि र आफन्तसङ्ग समन्यय गर्नु।
कति छ अहिले मोर्गेज ब्याजदर​ ?
१)३० बर्षे फिक्स ब्याजदर ३ दशमलब १२ र एपिआर ३ दशमलब २४ प्रतिशत​
२) २० बर्षे फिक्स ब्याजदर २ दशमलब ८७% र एपिआर ३ दशमलब शुन्य ९%
३) १५ बर्षे फिक्स दर २ दशमलब ५९% र ए पिआर २ दशमलब ७७५
४) १० बर्षे फिक्स ब्याजदर २ दशमलब ८५% र एपिआर ३ दशमलब शुन्य ३%
बर्ष फिक्स नगरिकनै एडजस्टेबल दरमा पनि घर किन्न र लेन्डरसङ्ग सम्झौता गर्न सकिन्छ​। तत्कालका लागि ए आर एम एडजस्टेबल ब्याजदर फिक्स दर भन्दा कम पर्न ग​एपनि कालान्तरमा ब्याजदर बढ्न ग​ए ढाद सेकिन सक्दछ​।
एपिआर अर्थात अन्युअल परसेन्टेज रेट बार्षिक प्रतिशत दरमा प्रशासनिक खर्च​, अन्य शुल्क​, कर​, क्लोजिङ्ग खर्च​, बिमा, ब्याजदर सबै जोडिएर आउनेहुन्छ भने ब्याजदर फिक्समा शुद्द ब्याजदर हुनेगर्दछ​। तत्कालका लागि फिक्स ब्याजदरमा जादा मोर्गेज ब्याजदर र मोर्गेज पेमेन्ट रेट सस्तो देखिने भ​ए पनि दिर्घकालिन रुपमा जादा पुर्ण मोर्गेजको स्वरुप हेर्दा एपिआर नै सस्तो र राम्रो हुने गर्दछ​।
आर्मि, पुर्ब आर्मि भेटरानहरुलाइ घर किन्दा सहुलियत पाउने ?
१) डाउन पेमेन्ट आबश्यक नपर्ने।
२) तर​, घरको मुल्य कर मुल्य भन्दा बढि भ​ए डाउन पेमेन्ट पर्न सक्दछ।
३) प्राइभेट मोर्गेज बिमा आबश्यक नपर्ने।
४) कम ब्याजदर प्राप्त हुने।
५) क्लोजिङ्ग खर्च कम लाग्ने।
६) क्रेडीट स्कोरमा शर्त धेरै नलाग्ने।
७) खरिद प्रक्रिया, क्लोजिङ्ग प्रक्रियामा सहज हुने।
डाउन पेमेन्ट किन माग्छ ? आबश्यक हुन्छ​ ?
१) क्रेडीट स्कोर हेर्छ​।
२) ऋण र कमाइ हेर्छ​।
३) एफ एच ए लोनमा ३ दशमलब ५ प्रतिशत डाउन पेमेन्ट लिनसक्ने।
४) कन्भेसनल मोर्गेज लोनमा लेन्डरले २०५ सम्म डाउनपेमेन्ट माग्न सक्ने।
५) केहि कन्भेसनल मोर्गेक कम्पनिले ३ दशमलब ५५ डाउन पेमेन्ट माग्न सक्ने।
६) डाउन पेमेन्ट क्रेडीट स्कोर​, कमाइ, क्रेडिट हिस्ट्रि, ट्याक्स फाइलिङ्ग​, पेस्टब​, डेब्ट र जायजेथाका आधारमा तय गर्दछ​। भने इमिग्रेसन स्ट्याटस पनि कुनै लेन्डरको लेन्डिङ्ग शर्त र कन्टेनमा पर्न सक्दछ​।
घर नक्किनुहोस यदि,
१) कमाइ राम्रो छैन​।
२) स्वास्थ्य राम्रो छैन​।
३) काम र रोजगारको स्थायित्व र निरन्तरता छैन​।
४) मन स्थिर छैन​।
५) परिवारमा मिलाप र समन्वय छैन​।
६) घरमा एउटाको मात्रै कमाइ छ​।
७) ठाउ सर्ने, काम सर्ने वा मुभिङ्गको योजना भबिष्यमा भ​ए।
८) सन्चिति सेभिङ्ग रकम छैन​।
९) आफ्नो अन्य थुप्रै ओभरहेड भ​ए।
घर किने खर्च बढ्छ​ ?
१) अनसिन खर्च बढ्छ​।
२) अनाबश्यक आपतकालिन खर्च आइलाग्छ​।
३) मर्मत सम्भार एबम मेन्टेन खर्च बढ्छ​।
४) पाहुनापाता, भाइसाथि भोजभतेर बढ्न थाल्छ​।
५) कर​, बिमा, ब्याजदर​, मर्मत सम्भार​, रङ्गरोगन​, ऋङ्गारपटार​, बन्दोबस्ति र शोभा बढाउदा खर्च बढ्छ​।
६) घरको लगानि फ्रिजिङ्ग लगानि हो। आम्दानि बढाउदैन तर खर्च बढ्छ​।
यी सबै कुरा थेग्न र धान्न र टार्न र मनग्गे कमाइ भ​ए मात्र घर किन्नु नत्र ब्यबसाय गरि कमाउन थालेपछि मात्रै घर किन्दा हुन्छ​। आफ्नो लहडमा अरुले उचालेको भरमा, अरुले घर किन्यो म पनि किन्छु भन्ने लहड र इमोसनमा आफ्नो कमाइको औकात नहेरि घाटि नहेरि हाड ननिल्नु। घरले जिवनभर आर्थिक दास बनाउछ भन्ने कुरा नभुल्नु। अरु बाकि केहि जानकारि चाहिए सम्पर्क गर्नु मलाइ।